Mpamatsy kiraro torolàlana sy orinasa - Mpanamboatra kiraro amin'ny torolàlana any Shina
Curtain fahazavana azo antoka
Masinina kely kokoa noho ny ascenseur an'ny mpandeha
Elevator mpandeha amin'ny efitrano milina
Elevator fampihetseham-pandehan'ny mpandeha tsy misy efitrano
Azo antoka, azo itokisana ary mora ny mametraka takelaka amin'ny fidirana avo
Elevator mandoro miaraka amin'ny fampiharana malalaka sy avo ...
Escalator anatiny sy ivelany
Fihetseham-batana mihetsika tokana miaro vonjimaika THY-OX ...
Double Moving Wedge Progressive Safe Gear THY-OX-18
Fitaovana fanamafisam-peo Elevator THY-OX-300
Governora miverina ho an'ny ascenseur mpandeha miaraka amin'ny milina ...
Kiraro torolàlana raikitra ho an'ny ascenseur mpitatitra entana THY-GS-02
Ny kiraro fitarihana vy THY-GS-02 dia mety amin'ny lafin'ny fiara amin'ny ascenseur milanja 2 taonina, ny hafainganam-pandeha dia ambany noho ny mitovy amin'ny 1.0m / s, ary ny sakan'ny lalantsara fitarihana dia 10mm sy 16mm. Ny kiraro fitarihana dia misy lohan'ny kiraro mpitari-dalana, vatan'ny kiraro mpitari-dalana ary seza kiraro fitarihana.
Kiraro torolàlana mihetsiketsika ho an'ny mpandeha mpandeha THY-GS-028
THY-GS-028 dia mety amin'ny lalamby fitarihana ascenseur miaraka amin'ny sakany 16mm. Ny kiraro fitarihana dia misy lohan'ny kiraro fitarihana, vatan'ny kiraro fitarihana, seza kiraro fitarihana, lohataona famatrarana, fitoeran-kaopy misy menaka ary singa hafa. Ho an'ny kiraro fitarihan-dàlana mitsingevana tokana amin'ny lohataona, dia afaka mitarika fiakarana amin'ny sisin-tany manakaiky ny faran'ny lalamby fitarihana izy io, saingy mbola misy elanelana lehibe eo anelanelany sy ny velaran'ny fiasan'ny lalamby mpitari-dalana. izay mahatonga azy io hiakatra amin'ny sehatry ny lalamby mpitari-dalana.
Kiraro fitarihana Sliding dia ampiasaina ho an'ny ascenseur mpandeha mahazatra THY-GS-029
THY-GS-029 Mitsubishi sliding guide kiraro dia napetraka eo ambanin'ny seza fiambenana eo amin'ny andry ambony amin'ny fiara sy eo ambanin'ny fiara. Amin'ny ankapobeny, misy 4 avy izy ireo, izay ampahany iray hiantohana ny fiara mihazakazaka sy midina manaraka ny lalamby mpitari-dalana. Ampiasaina indrindra amin'ny ascenseur izay haavo ambany noho ny 1.75m / s. Ity kiraro mpitari-dalana ity dia miorina amin'ny kirarony, seza kiraro, fitoeran-kaopy misy menaka, lohataona famatrarana ary faritra vita amin'ny kofehy.
Kiraro fitarihana Sliding dia ampiasaina ho an'ny mpandeha mpandeha antonony sy haingam-pandeha THY-GS-310F
Ny kiraro torolàlana haingam-pandeha haingam-pandeha THY-GS-310F dia manamboatra ny fiara amin'ny lalamby fitarihana mba hahafahan'ny fiara mihetsika sy midina ihany. Ny tapany ambony amin'ny kiraro mpitari-dalana dia misy kaopy misy menaka hampihenana ny disadisa eo amin'ny sisin'ny kiraro sy ny lalamby mpitari-dalana.
Kiraro torolàlana mihetsiketsika ho an'ny mpandeha mpandeha THY-GS-310G
Ny kiraro fitarihana THY-GS-310G dia fitaovana fitarihana izay afaka misosa mivantana eo anelanelan'ny lalamby fitarihana ascenseur sy ny fiara na ny lanjany. Izy io dia afaka mampiorina ny fiara na ny counterweight amin'ny lalamby mpitari-dalana mba hahafahany mihetsika ambony sy midina fotsiny mba hisorohana ny fiara na ny counterweight tsy ho Skew na savily mandritra ny fiasana.
Kiraro fitarihana solosaina ho an'ny toro-lalana Hollow Guide THY-GS-847
Ny kiraro mpitari-dalana THY-GS-847 dia kiraro fitarihana lalandrà miendrika W, izay manome antoka fa mihodina mitsivalana manaraka ny lalamby mpitari-dalana ny mpanohitra. Ny andiany tsirairay dia misy kiraro fitarihana mpanohitra efatra, izay apetraka eo amin'ny tapany ambany sy ambony amin'ny vatan'ny mpanohitra.
Kiraro Roller Guide Ho an'ny ascenseur haingam-pandeha THY-GS-GL22
Ny kiraro fitarihana THY-GS-GL22 dia antsoina koa hoe kiraro fitarihana. Noho ny fampiasana fifandraisana mihodina, ny fingotra mafy na ny takotra vita amin'ny volo dia apetraka amin'ny boribory ivelany amin'ny roller, ary lohataona manalefaka no apetraka eo anelanelan'ny kodiarana mpitari-dalana sy ny kiraro kiraro mpitari-dalana, izay afaka mampihena ny torolàlana. kiraro sy ny lalamby mpitari-dalana, mamonjy herinaratra, mampihena ny hovitrovitra sy ny tabataba, ampiasaina amin'ny haavo haingam-pandeha 2m / s-5m / s.
Kiraro fitarihana roller ho an'ny ascenseur any an-trano THY-GS-H29
THY-GS-H29 villa elevator roller guide kiraro dia misy fefy miorina, nylon block ary roller bracket; ny block nylon dia mifandray amin'ny rafitra voafetra amin'ny fasteners; ny bracket roller dia mifandray amin'ny endriny miorina amin'ny alàlan'ny tsorakazo eccentric; napetraka ny bracket roller Misy roera roa, ny rozika roa dia nalamina samy hafa tamin'ny zorony roa amin'ny zoro eccentric, ary ny velaran'ny kodiarana amin'ireo rozongozena roa dia mifanohitra amin'ny banga nylon.
Kiraro fitetezana Sliding ho an'ny Sundries Elevator THY-GS-L10
Ny kiraro torolàlana THY-GS-L10 dia kiraro fitarihana mpandeha an-tsarimihetsika, izay azo ampiasaina ho toy ny ascenseur an'ny masoandro. Misy kiraro mpitari-dalana miisa 4, kiraro mpitari-dalana roa ambony sy ambany, izay miraikitra amin'ny làlana ary mitana andraikitra amin'ny fanamboarana ny refin'ny counterweight.
Fantaro ny vaovao momba ny orinasa sy ny indostria
Faritra fampandrosoana, Tanànan'i Tangqiao, Tanànan'i Zhangjiagang, Suzhou